Ukuphatha udoti wezinkukhu
Ukuphathwa komswakama kuyisihluthulelo sokuphatha udoti wezinkukhu. Udoti omile kakhulu onothuli uzobangela ukuphelelwa kwamandla, uamanzi kanye nezinkinga zokuphefumula, udoti omanzi kakhulu uzokhuthaza ukukhula kokukhunta futhi kubangele ukukhiqizwa ngokweqile kwe-ammonia. Udoti olumanzi luzoholela intshabusuku, ukushisa kwesikhumba, ukulimaza, ukulahlwa kanye nokuhlaselwa phansiUkuze usebenzise iningi ladoti lezinkukhu, amazinga omswakama kufanele agcinwe phakathi kwamaphesenti angamashumi amabili namaphesenti angamashumi amabili nanhlanu.
Uma ingxenye encane ingacindezelwa, udoti kufanele uhambisane kancane. Imanzi kakhulu uma inamathela njengebhola futhi iyomile kakhulu uma ingahambelani nhlobo.
Ukuphathwa kahle kwadoti wezinkukhu kuqala ngokusebenzisa izinto zokulala ezifanele. (Funda kabanzi mayelana nezinto zokulala lapha.) Izinto kufanele zigcinwe ngendlela efanele ngaphambi kokuba zisetshenziswe, njengoba kuyoba nzima ukugwema izinkinga zadoti omanzi uma umbhede usuvele umanzi ngaphambi kokuthi ubekwe endlini yenkukhu.Abanye abalimi bayasakaza endlini yenkukhu ngesonto ngaphambi kokuba izinyoni ezintsha zifike, ukuqinisekisa ukuthi zomile.Lezi zinto kufanele ziphendukele njalo ukuze zihlale zomile.Izinyoni zizosiza ngalokhu ngokudala uthuli nokuklwebha impahla.
umklamo wesitsha sokuphuza kanye nokuphathwa kubalulekile uma kuziwa ekuphatheni udoti wezinkukhu.
Abalimi kufanele bahlole uhlelo lokuphuza futhi balungise ukuvuza emva kwezinyoni zisusiwe futhi ngaphambi kokuba izinyoni ezintsha ziqaliswe ohlelweni lokukhiqiza.Uhlelo kumele luhlolwe ngokucophelela lapho ukukhiqizwa sekuqalile, ukulungisa ukuvuza okusha ngokushesha nje uma kubonakala.
Okufanayo ngokufafazwa kwamanzi okungaholela udoti bezinkukhu ubemanzi uma kungalungile.Ukulahlekelwa kwamanzi esitsheni sokuphuza kumele kugwenywe.Kancane kancane ukuphakamisa isitsha sokuphuza ukuze kwenze lula ukuphuza njengoba izinyoni zikhula, kunciphisa umswakama wodoti ngo-7%.Iziqukathi zokuphuza nazo kufanele zibekwe esicelweni esifanele futhi zihlanzwe kahle ukuze zivimbele ukuvuza nokuqinisekisa ukusebenza kahle.Iziqukathi ezincane zokuthola kokuphuza zilahlekelwa amanzi amancane okuphuza ukwedlula Iziqukathi ezinamakhompi amakhulu okuphuza.
Ukudla okunomthelela kunomthelela emazingeni omswakama kadoti wezinkukhu, njengoba izithako ezithile zokudla, njengokasawoti, i-sodium bicarbonate, i-molasses, isoya, amino acid kanye neprotheyini, uma udliwe ngokweqile, kubangela izinyoni ukuthi ziphuze futhi zibeke amanzi amaningi.Ezinye zalezi zithako zingase ziholele ekuhudeni, okungeziwe ngaphezu kwamazinga aphezulu okumswakama kuzoholela emazingeni aphezulu e-nitrojeni.Ukucindezeleka okushisayo neminye imithi ingase ibe nomphumela ofanayo.
Ukunyuka kwenani, inani lezinyoni ezigcinwe ngamamitha ayizikwele, liyoba nomthelela emazingeni omswakama.Kungaba nzima ukugcina udoti emanzini afanele emswakama uma ukulingana kwamanani okuphezulu kusezingeni eliphezulu kakhulu.Umthamo wezinto zokulala ezisetshenzisiwe uzoba nemiphumela efanayo.
Ukulala okusabalalisa kakhulu ngeke kutholakale umswakama obuningi njengokulala okukhudlwana. Umthamo wezinto ezisetshenzisiwe uzoxhomekeka kwimvelo yokukhiqiza kanye nezinto zokulala ezisetshenziswa lapho.
Izimo zemvelo, njengezulu elimanzi noma elimswakama, ukunciphisa noma ukushisa okushisa kakhulu kungabangela udoti omanzi uma uhlelo lwezinkukhu lokungenisa umoya endlini nokushisa alukhiphi kahle umswakama.
Izinkinga zokujija kufanele ziqedwe ngokusebenzisa ukuchithwa okulungile kwesakhiwo kanye nokunikezwa kwamanzi.ukungeniswa komoya kanye nokushisa kumele kusebenze ngokucophelela ukugcina izimo zezulu zilungile.